Ahoana ny fomba hananganana tetik'ady fanatsarana ny mason'ny Amazon amin'ny alàlan'ny fikarohana?
Amin'izao andro iainantsika izao, i Amazon dia heverina ho ny sehatra lehibe indrindra sy ny sehatra ecommerce mahasoa indrindra ary manana mpisera mavitrika maherin'ny 80 tapitrisa. Ny rafitra fananganana Amazon dia natsangana amin'ny fomba toy izany mba ahafahan'ny mpanjifa mividy ny vokatra rehetra eo amin'ny sehatra iray. Miezaka manome mpivarotra azy ireo ny traikefa ambony indrindra amin'ny fividianana entana izy ireo mba hamerenana azy ireo bebe kokoa. Miaraka amin'ny fanampian'ny algorithm A9, Amazon dia manome ny mpampiasa ny valiny azo tsoahina indrindra araka ny fijeriny manokana sy ny tantaran'ny fikarohana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia mamela ny zava-drehetra i Amazon, mba hanamora ny fividianana azy ireo.
Noho izany, ny zava-drehetra tokony hataontsika mba hahombiazan'ny Amazon dia ny manatsara ny lisitra araka ny toro-làlana voalazan'ny Amazon - melhor hospedagem cloud brazil 2016. Ireo singa telo fototra izay misy fiantraikan'ny vokatra eo amin'ny Amazon dia ahitana ny lanjany, ny fihenam-bidy, ary ny vokatra vokatra. Amin'ity lahatsoratra fohy ity, hahita ny fomba hananganana tetik'ady Amazon SEO ianao ary hanatsara ny laharana vokarinao ao amin'ireo faritra telo ireo.
Mitombo ny maha-zava-dehibe ny pejin-tserasera
Ny singa tena ilaina amin'ny algorithm amin'ny algorithme Amazon dia ny mifanandrify amin'ny vokatra mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpampiasa. Midika izany fa ny maha-zava-dehibe ny pejy momba ny vokatra dia hisy fiantraikany mivantana mivantana amin'ny vokatrao. Misy farafaharatsiny fito farafaharatsiny ao amin'ny lisitry ny vokatrao izay mila raisinao:
sarotra noho ny ao amin'ny Google. Manana ny fepetra takian'ny fanamafisana ny Amazon raha toa ka mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny mpanjifa izany. Midika izany fa raha toa ka tsy soloina tsara ny lohateninao dia tsy hihaona velively amin'ny Amazon SERP ianao. Eto ianao dia tsy tokony hiraharaha afa-tsy ireo teny fanalahidy tianao amboarina. Tokony hikaroka bebe kokoa momba ny fanoritsoritana ny anaramanao ianao. Azo eritreretina ny manoratra momba ny vokatrao sy ny endri-javatra tianao indrindra, afa-tsy ny fampahalalana fanampiny. Tsara ny manamarika fa nanomboka nanitsy ny lohateny i Amazôna.
Ity lisitry ny lisitra ity dia napetraka teo ambonin'ilay lohateny. Eto ianao dia mila milazalaza ireo hevi-dehibe momba ny vokatra manan-danja, mampiavaka ny tombotsoany. Ireo sombin-balala dia sazy fohy izay mamaritra ny fivarotana fohy. Ny famakiana izany fampahalalana izany, ny mpividy Amazon dia tokony hahalala raha mila mividy entana izy, na tsia.
Ny famaritana ny vokatra dia manome fampahalalana bebe kokoa noho ny bala. Io sehatra io dia mamaly ny fanontaniana mety ho an'ny mpampiasa rehetra ary manampy azy ireo handray fanapahan-kevitra tsara. Mazava tsara ny manatsara ny famaritana ny vokatrao ary mametraka ny teny fikarohana indrindra. Hisy fiantraikany amin'ny vokatrao amin'ny vokatrao izany ary hampitombo ny fivarotana.
Raha toa ianao ka mivarotra ny entana voafantina izay fantatry ny olona, ​​dia mila ampidirinao ao amin'ny lohanao.
Ny valin'ny fikarohana Amazon dia aseho amin'ny sokajy sokajy. Izany no antony ilainao hametrahana entana eo ambanin'ny sokajy marina.
Araka ny nolazaiko etsy ambony, misy sokajy fito voalohany amin'ny Amazon. Azo ekena ny hampiditra ny teny fikarohana ao amin'ny tsirairay mba hahitana ny lisitra hita ao amin'ny Amazon SERP. Tsara ny manamarika fa mila miala amin'ny teny fohy ianao raha toa ka mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fampiroboroboana anao amin'ny Amazon.
Tokony hotsinjovina tsara ny soso-kevitry URL Amazon raha toa ka fomba tsara indrindra hahafantarana ny maha-zava-dehibe ny lisitra sy ny fikarohana. Ny fitsipika URL dia mitovy amin'ny "keyword = ny vokatra + keyword. "Azonao atao ny hampihena izany amin'ny fampiasana rindrambaiko manokana, ary farany, mitondra fiara mifamoivoy amin'izany. Vokatr'izany, i Amazon dia hamaritra fa ireo mpitsidika dia nitady ny vokatra ho an'ny teny fanalahidy.
Ataovy ny lisitra kasainao hatao
. Raha manana tahan'ny fiovam-po ambony ianao, dia mampiseho an'i Amazona fa tia ny vokatrao ny mpampiasa, ary azo inoana fa ny lisitrao dia hiseho ao amin'ny TOP OF Amazon search. Ireto manaraka ireto dia tokony homarihina mba hampitombo ny taham-pivarotana vokatrao.
Ny tena mahomby indrindra amin'ny Amazon dia varotra. Raha manana lava lava sy mahaliana ianao, dia hitombo avo kokoa amin'ny Amazon SERP. Ireo vokatra miaraka amin'ny fivarotana avo indrindra dia miorina hatrany eo amin'ny pejy voalohan'ny Amazon raha mitondra fitaterana bebe kokoa ho an'i Amazon.
Another factor for Amazon ranking is the number and quality of review reviews. Alohan'ny hividianana mividy, matetika ny mpampiasa dia mamerina ny fanandramana mpanjifa teo aloha mba hijery izay lazain'ny mpampiasa azy. Mila mamorona fanavaozana bebe kokoa ianao, indrindra rehefa manolotra lisitra vaovao. Na izany aza, ataovy azo antoka fa tsy manentana ny mpanjifanao hanoratra hevitra tsara ianao satria mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny laharam-pizahanao izany.
Tsy fantatro tsara hoe inona no fiantraikan 'ny fanontaniana sy valiny momba ny vokatra vokarin'ny vokatra, noho ny fahaizany mamely ny fiovam-po. Raha tsy misy valiny mazava amin'ny fanontanian'ireo mpanjifa, dia mety hihevitra izy ireo fa tsy mahazatra ny vokatra na ianao dia kamo loatra hikarakarana ny zavatra takian'ny mpanjifanao.
Ny kalitaon'ny sary vokarinao koa dia manan-danja amin'ny fandaharana Amazon. Ilainao ny manome ny mpampiasa manana fahaizana hitsaoka ny angona tsirairay. Izany no antony itiavan'io sary io fa tokony ho 1000 px na avo fara fahakeliny. Ataovy azo antoka fa manana sary fanampiny amin'ny sary ianao mba hampiseho ny antsipirihany rehetra ilaina.
Raha mpivarotra Amazon ianao, dia mety handray anjara amin'ny ady amin'ny vidiny ianao. Mividy ny vokatra mora indrindra eny an-tsena ny mpampiasa. Izany no antony tokony hitazomana ny vidin'ny fifaninanana. Ankoatra izany, iray amin'ny antony iray raha afaka mandresy ny Box Buy (Buy Buy) ilay mpivarotra.
Ampihenana ny sanda fampidinana
Ny taham-pihazakazaka, ary koa ny fotoana iray ampiasain'ny mpampiasa amin'ny pejin-tsarinao. Raha mijanona ela ao amin'ny pejinao ilay mpividy, dia hisy fiantraikany amin'ny fiovam-ponao izany, ary Amosa dia mety hanatsara kokoa ny toerana misy anao. Izany no antony tokony hanarahanao mandrakariva ny fomba fijery toy izany mba hahafahanao mandinika ny paikadinao ara-potoana.